Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maantay Oo Arbaco Ah 15 June
HomeSuuqa kala iibsigaWararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maantay Oo Arbaco Ah 15 June
June 15, 2022 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada, Warka Xiisaha Leh 0
Manchester United ayaa dalab ka gudbisay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Denmark Christian Eriksen, oo 30 jir ah, xilli qandaraaskiisa Brentford uu dhacayo dhamaadka bishaan.
Xiisaha Manchester United ee Eriksen ayaan meesha ka saari doonin u dhaqaaqista bartilmaameedkooda 1-aad ee Frenkie de Jong, oo 25 jir ah, iyadoo ay sii socdaan wadahadalada ay kula jiraan kooxda khadka dhexe ee reer Holland ee Barcelona. Mail
De Jong ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay xiisaha United laakiin uu haatan ku sugan yahay kooxda ugu weyn adduunka. Metro
Bayern Munich ayaa diyaarinaysa dalab 34.6 milyan ginni ah oo ay ku doonayso weeraryahanka reer Senegal ee Sadio Mane ka dib markii Liverpool ay diiday labadii dalab ee hore ee ay kooxda Jarmalka ka gudbisay 30 jirka. Mail
Juventus ayaa ku dhow inay heshiis la gaarto xiddiga khadka dhexe ee France iyo Manchester United Paul Pogba, oo 29 jir ah, kaasoo ka tagi doona Old Trafford marka uu qandaraaskiisu dhaco bishaan. Fabrizio Romano
Manchester City ayaa laga yaabaa inay kor u qaado in ka badan 200 milyan ginni iibka ciyaartoyda xagaagan iyadoo kooxdu ay isha ku heyso 26 jirka qadka dhexe ee Leeds United Kalvin Phillips. Telegraph
Weeraryahanka City ee Brazil Gabriel Jesus, oo 25 jir ah, ayaa doonaya inuu ku biiro Arsenal si uu ula midoobo tababaraha Gunners Mikel Arteta, kaasoo hore u ahaa ku xigeenka tababaraha Etihad Stadium. Evening Standard
Everton’s Richarlison, oo 25 jir ah, ayaa iska diiday dalab uga yimid Arsenal – iyadoo Chelsea iyo Tottenham Hotspur la sheegay inay yihiin meelaha uu doorbidayo weeraryahanka Brazil. Liverpool Echo
Inter Milan ayaa riixeysa saxiixa Romelu Lukaku, oo 29 jir ah, kana tirsan Chelsea iyadoo weeraryahanka Belgium uu isku diyaarinayo inuu dhimo mushaarka si uu ugu laabto kooxda Serie A. Fabrizio Romano
Real Madrid ayaa ku dhow inay heshiis cusub ka saxiixato weeraryahanka Brazil Vinicius Jr, 21. Goal
Leeds United ayaa heshiis afka ah la gaartay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Isbaanishka Marc Roca, oo 25 jir ah, oo uga yimid Bayern Munich heshiis afar sano ah oo ku kacaya 12 milyan euro iyo waxyaabo kale. Fabrizio Romano
Laacibka Arsenal ee Victor Osimhen ayaa sheegay inuu go’aansan doono mustaqbalkiisa xagaaga dambe ka dib markii 23-sano jirka Nigeria iyo Napoli uu qirtay inuu ka warqabay xiisaha kooxo ka dhisan England iyo Spain. Standard
Daafaca Manchester City ee Japan Ko Itakura, oo 25 jir ah, ayaa waxaa dooneysa Borussia Monchengladbach . Mail
Chelsea ayaa ka fiirsaneysa inay heshiis la gaarto goolhayaha xulka qaranka Albania ee Lazio Thomas Strakosha, oo 27 jir ah, hadii goolhayaha Spain Kepa, oo 27 jir ah uu ka tago kooxda xagaagan. Fabrizio Romano
Garabka Leeds ee Raphinha, oo 25 jir ah, ayaa diirada u saaran labada kooxood ee Arsenal iyo Tottenham Hotspur xagaagan, iyadoo ay jirto walaac laga qabo in Barcelona ay awoodi weydo inay maalgeliso heshiiska xiddiga heerka caalami ee dalka Brazil. Sports
Tottenham iyo Juventus ayaa laga soo diiday dalabyada Udinese iyo Italy ee 21 jirada dambeedka bidix Destiny Udogie, 19. Sun
Middlesbrough iyo xulka England ee da’doodu ka hooseyso 21 jirada Djed Spence , oo xilli ciyaareedkii hore amaah ku joogay Nottingham Forest , ayaa doorbidaya inuu u dhaqaaqo Tottenham . Sports
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Uruguay Lucas Torreira, oo 26 jir ah, ayaa ku laaban doona Arsenal ka dib markii Fiorentina ay go’aansatay inaysan ka dhigin heshiis amaah ah oo joogto ah. Standard
West Ham ayaa xiiseyneysa saxiixa garabka reer Belgium Adnan Januzaj, oo 27 jir ah, kana tirsan Real Sociedad . Mirror
Nantes ayaa dalab u dirtay goolhayaha kooxda Nottingham Forest ee Congo Brice Samba, 28. Insider
Wolves ayaa weli kalsooni ku qabta inay la soo saxiixato ciyaaryahanka khadka dhexe ee Portugal Joao Palhinha oo ka tirsan Sporting Lisbon inkastoo Fulham ay isku dayday inay 26 jirkaan ku tijaabiso Craven Cottage. Sun
Bournemouth ayaa ugu cadcad kooxaha Nottingham Forest iyo Fulham si ay ula soo saxiixdaan khadka dhexe ee Ingariiska Joe Rothwell, oo 27 jir ah, kana tirsan Blackburn Rovers . Insider